Indoor sy ny fitaovana ivelan'ny trano - China Gormeet Plastic
Ireo sokajy ireo dia ahitana Firenena Mikambana nizara namely haingokaingony vokatra, toy ny hoe: Storage efitrano mora io-to-mivory ivelan'ny trano fitahirizana nalatsany azo apetraka na aiza na aiza ao amin'ny tokotany na fitehirizana tokotanin-tsambo izay no ilaina. Ny zaridaina ivelan'ny trano fitehirizana nalatsany manana sloped tafo. Tanteraka noho ny mitahiry ny bozaka fitaovana, fanatanjahan-tena fitaovana, sy ny fanaka Patio, nalatsak'i io dia zavatra maro sy mateza. Pet vokatra avy portable cabins ny alika trano ivelan'ny trano lehibe, dia manana ny ilaina awnings sy ny Accessories mba hifanaraka tsara indrindra ny Perso ...
Novolavolaina Exterior Options
1. Rainbow ny loko
2. Custom Logo Plate amin'ny novolavolaina
3. Nanangana soratra
4. feno lavaka Custom sarony Plate
Ireo sokajy ireo dia ahitana Firenena Mikambana nizara namely haingokaingony vokatra, toy ny hoe:
Izany mora-to-mivory ivelan'ny trano fitahirizana nalatsany azo apetraka na aiza na aiza ao amin'ny tokotany na fitehirizana tokotanin-tsambo izay no ilaina. Ny zaridaina ivelan'ny trano fitehirizana nalatsany manana sloped tafo. Tanteraka noho ny mitahiry ny bozaka fitaovana, fanatanjahan-tena fitaovana, sy ny fanaka Patio, nalatsak'i io dia zavatra maro sy mateza.
Avy portable cabins ny alika trano ivelan'ny trano lehibe, dia manana ny ilaina awnings sy ny Accessories mba hifanaraka tsara indrindra ny zavatra ilaina manokana, ny habeny sy ny toetrandro ny tokotany. Na inona na inona karazana biby ianao, samy manana fomba isan-karazany ny habe, ka afaka mifidy ny tsara lehibe na kely alika trano ho an'ny biby.
Ny zava-baovao Pet Gear Dingana sy fiakarana manolotra biby fiompy ho malemy fanahy hantsana mba ho mora ho azy ireo ny tonga Sofas, fandriana, sy ny maro hafa. Izany dia midika hoe vita tamin'ny plastika sy mateza novolavolaina tonga amin'ny mifidy loko safidy. Ny karipetra dia removable ary milina washable. Nanao ny fampiononana sy ny fiarovana ny biby fiompy, hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana ho anao sy ny manan-tongotra efatra namana noho ny fanampian'ny Pet Gear.
Toy ny ranomandry vata, fonony misy manda roa sosona-mamorona insulation ambony. Afaka ampanjifaina ny habeny, ny lokony, hatevin'ny ny mangatsiaka kokoa.
Misotro loharano faritra plastika, plastika varavarana, fantsona plastika, plastika kodiarana, etc ..